RASMI: Horyaalkii Labaad Oo Wayn Oo Yurub Ah Oo Si Rasmi Ah Loogu Dhawaaqay Maalinta Uu Dib U Bilaamayo. - Gool24.Net
RASMI: Horyaalkii Labaad Oo Wayn Oo Yurub Ah Oo Si Rasmi Ah Loogu Dhawaaqay Maalinta Uu Dib U Bilaamayo.
Kubbada cagta Yurub ayaa si rasmi ah garoomada ugu soo laabanaysa kadib markii horyaalkii labaad oo wayn oo Yurub ah si rasmi ah loogu dhawaaqay taariikhda rasmiga ah ee uu dib u bilaamayo.
Kadib markii hore loo shaaciyay in horyaalka Jarmalka ee Bundesliga uu isla sabtida fooda inagu soo haysa uu furmayo waxaa hadda si rasmi ah loo shaaciyay maalinta rasmiga ah ee uu dib u bilaamayo horyaalka dalka Talayaniga ee Serie A.
Maamulka horyaalka Serie A ee Lega Serie A ayaa ku dhawaaqay in May 18 ay kooxaha horyaalka Talyaanigu si rasmi ah u bilaaban doonaan tababarka isla markaana June 13 ay noqon doonto maalinta uu xili ciyaareedku dib u furmi doono.
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa socday wada hadalo waqti dheer qaatay oo ay ku lug lahaayeen dawlada Talyaaniga gaar ahaan wasaaradaha ciyaaraha iyo caafimaadka waxaana sidoo kale saamayn ku lahaa xidhiidhka kubbada cagta Talyaaniga iyo maamlka Serie A ee Lega Serie A.
War saxaafaadeed uu soo saaray maamulka Serie A ee Lega Serie A ayaa lagu shaaciyay in June 13 ay tahay taariikhda loo qorsheeyay in xili ciyaareedka 2019/2020 uu dib u bilaami doono.
Shir maanta la qabtay ayaa laysku raacay nooca tilmaamaha caafimaad ee ay raaci doonaan ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxaha Serie A kaas oo ugu danbayn heshiis buuxa laga gaadhay si xili ciyaareedka loo bilaabo.
Kulan oo maanta oo arbaca ahayd muuqaa toos ah ku dhex maray dhamaan kooxaha 20 ka kooxood ee Serie A iyo maamulada kubbada cagta ayaa laysku raacay in June 13 ay noqoto maalinta uu xili ciyaareedku dib u furmi doono.
War saxaafadeedka ka soo baxay maamuulka horyaalka Serie A ee Lega Serie A ayaa lagu yidhi:”Taariikhda June 13 waa dib u bilaabashada xili ciyaareedka’.
Laakiin marka ay kooxuhu ku soo laabtaan tababarka buuxa maalinta isniinta waxay noqon doontaa mid xaalada lagu sii darsi doono iyada oo ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxaha laga doonayo in ay tilmaamaha caafimaad u hogaansamaan.
Haddii sida lagu dhawaaqay uu horyaalka Serie A ku bilawdo June 13, waxa uu qorshuhu yahay in saddexdii maalmood ama afartii maalmoodba ay hal kulan koox kastaaba ciyaari doonto ilaa inta la soo gaadhayo dhamaadka kulamada Serie A.
Waxayna tani fursad siinaysaa tartanka labaad ee Coppa Italya kaas oo la ciyaari doono bisha July halka kulamada Champions League iyo Europa League la ciyaari doono bisha August sida ay UEFA qorshaysay.
Mar haddii la shaaciyay waqtiga uu horyaalka Serie A bilaami doono isla markaana uu horyaalka Bundesliga uu sabtida dib u furmayo waxaa hadda la sugayaa horyaalada Premier League iyo Serie A oo aan waqtigooda la go’aamin.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta isniinta waxaa markii ugu horaysay la arki doonaa kooxaha Serie A oo tababarka si buuxda ugu soo laabtay si ay iskugu diyaariyaan dib u curashada Serie A.